Abazali bakaTiger Woods: Hlangana noMama noTata
Uninzi kangakanani ngabazali bakaTiger Woods ? Uyise wakhe udume kakhulu kunomama wakhe, kodwa abazali bobabini badlala indima enkulu ekuncedeni i-Woods ibe yinye yegolfu ephezulu kunazo zonke . Uyise wakhe wazisa i-Woods kwigalufu waza wamkhokela ngegalufa elincinane kunye negalofu; unina wachithe iiyure ezininzi kwiimoto eziqhuba iTiger ukuya kunye nakwii-tournaments, ezamxhasayo kwaye zikhuphe ikhosi (kwaye ikwajongene neTiger egqoke obomvu kwiinqanaba zokugqibela .)
UYise kaTiger: u-Earl Woods uSr.
U-Earl Woods Sr wazalwa ngo-Matshi ka-1932 eManhattan, Kan., Waza wafa ngoMeyi ka-2006 eneminyaka engama-74 ubudala. U-Earl Sr. naye ungumkhulu womntakwabo kaTiger , i-LPGA golfer i- Cheyenne Woods .
U-Earl wayilungu leMpi yase-United States kwaye wakhonza ngexesha leMfazwe yaseVietnam. Wazisa uTiger kwigalufu ngaphambi kokuba iGiger ikhule ngokwaneleyo ukuhamba, kwaye iTiger yakhula ukufunda nokudlala kwiikholeji zezemidlalo zaseKalifornia.
U-Earl Woods wayedume kakhulu ekulandeleni umdlalo weTiger, kwaye wabhala incwadi ezininzi malunga nokukhulisa abantwana kunye negalufu. Wafa emva kwexesha elide kunye nomdlavuza wesibeletho.
Umama kaTiger: i-Kultida (i-Punsawad) i-Woods
I-Kultida Woods (intombikazi yasePunwawad) ngumthonyama waseThailand, wazalwa ngo-1944. Ubizwa ngokuba ngu "Tida" ngabahlobo. Ekuqaleni kwenkqubo yokugalufa ye-Woods - i-Junior and amateur, kodwa nakwimisebenzi yakhe yobungcali - "iTida" yayiyinto eqhelekileyo yokulandela i-Woods kwizihlwele kwiziganeko.
Intlanganiso ye-Earl neTida kunye noMtshato
U-Kultida no-Earl bahlangana xa u-Earl ehleli eThailand ngo-1966, ngexesha lakhe emkhosini. Baqala ukuthandana, kwaye ubudlelwane babo baqhubeka xa u-Kultida efudukela e-United States ngo-1968. UTida no-Earl Sr. batshata ngo-1969 baza bahlala batshata kwada kwafa ngo-2006.
I-Tiger ngumntwana kuphela we-Earl kunye ne-Kultida Woods. Nangona kunjalo, u-Earl watshata kanye ngaphambili kwaye waba nabantwana abathathu emtshatweni wakhe wokuqala, ngoko i- Woods inabantwana abantakwabo abakhulu-abazalwana kunye nabaxhasi .
Iimifanekiso zamaHlabathi eziLungileyo
IBrown v. IBhodi yeMfundo
2009 AmaNqaku malunga nabafazi kunye neengxaki zabasetyhini
Izizathu ezilishumi elinesibini ndizithandayo nokuzonda ukuba yiNqununu yesikolo
IJamani - IiRekhodi zokuzalwa, iMitshato kunye nokuFa
ImiSebenzi ephezulu e-10 ekuSebenziseni ipesenteji enkulu kunazo zonke zabafazi
10 Musa ukulahlekelwa iIqoqo zeMephu zeMephu kwi-Intanethi
2013 I-Chevrolet Silverado 1500
UkuLoba okuPhezulu kweNorth Florida
Ukukhangela iSipho se-astronomy-themed Gift?